कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचार ठूलो कि प्रविधि ? – www.janabato.com
कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचार ठूलो कि प्रविधि ?
८ आश्विन २०७६, बुधबार ०६:४० September 25, 2019 Janabato Online
नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुभित्र विचार र प्रविधिवारे सघन छलफल हुँदै आएका छन् । खासगरि वर्गसङ्घर्ष, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, बलप्रयोगको अनिवार्यता र निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरु विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा मसालभित्र यो चर्चा भएको देखिन्छ ।
अझ विचार, दर्शन र राजनीतिभन्दा प्रविधि र ‘एप’ नै मुख्य भएको प्रविधिवादी तर्कहरु उठिरहेको छ । यो चिन्तनले समाजको चालक शक्ति वर्गसंघर्ष हो भन्ने मालेमावादी मान्यतामाथि हमला गरेको छ । प्रविधि र विचारमा कुन ठूलो हो भन्ने कुरा उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्धमा कुन ठूलो हो भन्ने लडाइँ जस्तै हो । साधन र साध्यको लडाइँमा जहिले पनि साध्य प्रमुख हुन्छ । साधनका त हजारौं विकल्पहरु छन् ।
प्रविधिको विकास नभएको बेलामा मानव श्रमका साधनद्वारा इजिप्टको झुल्ने बगैचा, चिनियाँ पर्खालदेखि संसारका सात आश्चर्य, क्रेन, जेसीवी, एक्स्क्याभ्याटर, लोडर, डोजर, बुल्डोजरको विकास नभइसकेको अवस्थामा बनेका हुन् । नेपालको पहिलो राजमार्ग त्रिभुवन राजपथ प्रविधिभन्दा मानवका दश नंग्रा खियाएर, हातले खोतलेर, बनाइएको हो ।
मालेमावादलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्दै विचारको विकास गर्ने हो । वस्तु परिस्थितिमा परिवर्तन भएपछि पहिलेका व्याख्या र सन्दर्भले मेल खाँदैनन् । वर्गसंघर्ष, उत्पादनका निम्ति संघर्ष र त्यसको वैज्ञानिक प्रयोगले मात्र विचारमा विकास हुन्छ । माक्र्सवादी वैचारिक धरातलमा टेकेर नै लेनिन र माओले विचारको विकास गरेका हुन् ।
ल्युशाओचीले भने झैं विचारलाई शुन्यतामा पुर्याएर आत्मप्रशिक्षणवादको तरिकाबाट विचारको विकास हुँदैन । प्रविधिमा निरन्तर विकास भइरहेको हुन्छ । राजनीतिक अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार प्रविधिमा विकास हुनु भनेको उत्पादक शक्तिको विकास हुनु हो र त्यसलाई उत्पादनसम्बन्धले भेटाउनु पर्दछ ।
प्रविधि भनेको पदार्थ हो । त्यसबाट नयाँ चेतना पैदा हुन्छ । विकसित उत्पादक शक्ति र पछि परेको उत्पादन सम्बन्धबीच तालमेल पैदा हुन्छ र नयाँ क्रान्ति हुन्छ । यसरी ढिलो वा छिटो उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्धका बीचमा तालमेल भइरहन्छ । युगको कुरा, समयको कुरा, क्युवाली क्रान्ति भएको साठी वर्ष बितिसकेको कुरा, क्रान्तिको भविष्यवाणीका कुरा आदिका जवाफ माक्र्सले उहिल्यै दिइसक्नु भएको छ ।
सामाजिक परिवर्तन दश वर्षमा, ५० वर्षमा वा १०० वर्षमा पनि हुन सक्छ । लेनिन र माओको पालामा दुईवटा विश्वयुद्ध २५ वर्षकै अन्तरालमा भए । साम्राज्यवाद कमजोर भएको बेलामा लगातार संसारको छ भागको एक भागहुँदै संसारको तीन भागमध्ये एक भागमा १९५९ सम्म आइपुग्दा क्रान्ति सम्पन्न भयो ।
तेस्रो विश्वयुद्ध पनि अवश्यंभावी छ । कि त क्रान्तिले विश्व युद्ध रोक्ने हो, कि त विश्वयुद्धले क्रान्ति निम्त्याउने हो । एशिया अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गरेर समाजवादी क्रान्तिमा फड्को मार्ने र पहिलो तथा दोस्रो विश्वमा समाजवादी क्रान्तिहुँदै संसार नै साम्यवादमा पुग्ने हो ।
हरेकलाई क्षमताअनुसारको काम र कामअनुसारको माम अनि क्षमताअनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको माममा प्रविधिको विकास सहायक मात्र सिद्ध हुन्छ, आफैमा साध्य त हुँदैन । हामीले अहिले प्रयोग गरेको प्रविधि विकसित देशहरुले १०० वर्ष पहिले नै गरिरहेका थिए । त्यसले त क्रान्तिलाई रोकेन, बरु १९४५ देखि १९५९सम्म संसारको एकतिहाई भूभागमा क्रान्ति भएको थियो । अहिले सूचना र सञ्चारमा आएको अभूतपूर्व परिवर्तनले क्रान्तिलाई झनै नजिक्याएको छ । एउटा सानो गाउँको सूचाना संसारभर र संसारभरका सूचना एउटा सानो गाउँमा पुर्याएर स्थानीयलाई अन्तर्राष्ट्रिय र अन्र्ताष्ट्रियलाई स्थानीयकरण गर्न र एकताको सूत्रमा बाँध्न मद्दत पुर्याएको छ ।
चमेली क्रान्तिहुँदा सञ्चारमाध्यमहरु र त्यो पनि फोन तथा सामाजिक सञ्जालको भरमा अरबजस्ता देशका निरंकुश शासकहरु फ्याँकिएका थिए । अहिले सञ्चार तथा अन्य प्रविधिमा भएको विकास र विस्तारले विश्वव्यापी लडाइँ संभव गराएको छ । विश्वका मजदुरहरु एक हुने पनि यही अर्थमा होला । प्रविधि साधन हो र विचार, दर्शन तथा सिद्धान्त साध्य हो । साधन र साध्यको केही समय बेमेल देखिए पनि एकस्तरमा पुगेर यी बीचमा तालमेल र सन्तुलन रहन पुग्छ । त्यो अभूतपूर्व क्रान्तिकारी परिवर्तन हुनेछ ।
हो पनि, अहिले विकसित भएको प्रविधि सिमित र मुट्ठीभरका मानिसको हातमा पुगेको छ । बहुसंख्यक जनताका हातमा त्यो प्रविधि पनि पुगेको छैन तर क्रान्तिकारीहरु आत्तिने र कहालिने होइन, वर्गसंघर्षसँगै त्यो प्रविधिलाई जनताको हातमा पुर्याउनु पर्छ । त्यसैले, विकसित साधन आफ्नो हातमा नआउन्जेल सरल जीवन उच्च विचारको आधारमा दीर्घकालीन लडाइँ लड्ने हो । मजदुर वर्गले ती विकसित साधन र प्रविधिहरु दीर्घकालीन लडाइँसँगै वर्गसंघर्ष र निरन्तर क्रान्ति मार्फत् आफ्नो हातमा ल्याउँछन् ।
← नेपालको सार्वभौमिकता र इन्डो–प्यासिफिक रणनीति
विपी विचारको नगर समिति विस्तार →
परिषदको नियमित मासिक संगम सम्पन्न
७ जेष्ठ २०७५, सोमबार ०४:१९ Janabato Online Comments Off on परिषदको नियमित मासिक संगम सम्पन्न
अर्घाखाँचीमा मनाइयो ४० औ पुुष्पलाल स्मृति दिबस
७ श्रावण २०७५, सोमबार १४:१७ Janabato Online Comments Off on अर्घाखाँचीमा मनाइयो ४० औ पुुष्पलाल स्मृति दिबस
सर्वोच्चको नेतृत्व गर्न पराजुली अयोग्य, सत्याग्रही जारी रहन्छ : डा.केसी (विज्ञप्तीसहित)
२७ पुष २०७४, बिहीबार १२:२२ Janabato Online Comments Off on सर्वोच्चको नेतृत्व गर्न पराजुली अयोग्य, सत्याग्रही जारी रहन्छ : डा.केसी (विज्ञप्तीसहित)